၀၄:၂၅၊ ၄ မတ် ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ
၁၀၄၀၆ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်
၁၆:၂၇၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၄:၂၅၊ ၄ မတ် ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
'''ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်''' (Carbohydrate) သည် [[ကာဗွန်]](Carbon)နှင့် [[ရေ]](Water)ဓာတ် အဓိကပါဝင်သည့် ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လူတို့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် သကြားဓာတ်များဖြစ်သည်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်သည် ခန္ဓာကိုယ် ပူနွေးနေစေရန်လည်း အပူဓာတ်ကို ပေးလေရာ အေးသော တိုင်းပြည်တွင် နေထိုင်သူများသည် အပူဓာတ်ပေးနိုင်သည့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါသော အစာများနှင့် အဆီများသော အစာများကို များစွာ စားသောက်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ဇီဝကလပ်ပြု ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်၍ သစ်ပင်များသည် ရေနှင့်ကာဗွန်မှ ချက်လုပ်၍ အာဟာရအဖြစ် မှီဝဲကြရသည်။ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း လောင်စာ အဟာရဖြစ်သည်။ သကြား၊ ကစီကော်များသည် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပင် ဖြစ်သည်။ အာလူး၊ ဂျုံ၊ ဆန်တို့တွင်လည်း ပါရှိသည်။<ref>လှသမိန် ၏ ဗဟုသုတစွယ်စုံ</ref>
[[Image:Lactose.svg|thumb|right|310px|[[Lactose]] isa[[disaccharide]] found in [[milk]]. It consists ofamolecule of [[galactose|D-galactose]] andamolecule of [[glucose|D-glucose]] bonded by beta-1-4 [[glycosidic linkage]]. It hasaformula of C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>.]]
ဇီဝကလပ်ပြု ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်၍ သစ်ပင်များသည် ရေနှင့်ကာဗွန်မှ ချက်လုပ်၍ အာဟာရအဖြစ် မှီဝဲကြရသည်။ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း လောင်စာ အဟာရဖြစ်သည်။ သကြား၊ ကစီကော်များသည် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပင် ဖြစ်သည်။ အာလူး၊ ဂျုံ၊ ဆန်တို့တွင်လည်း ပါရှိသည်။<ref>လှသမိန် ၏ ဗဟုသုတစွယ်စုံ</ref>
အသက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ် တည်မြဲနေသမျှ လှုပ်ရှားသွားလာမှုရှိရာ၊ ထိုလှုပ်ရှားသွားလာမှုကို လူကိုယ်ခန္ဓာ၌ စွမ်းအင်မရှိဘဲနှင့် မပြုလုပ်နိုင်ချေ။ ထိုလှုပ်ရှားမှုအတွက် လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ် စားသောက်သော အစာအာဟာရများထဲ၌ ပါရှိသော ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓါတ်က ပေးသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ကြီး လှုပ်ရှားမှုများလေ စွမ်းအင်ကို လိုလေဖြစ်သဖြင့် ကလေးထက် လူကြီးမှာ ပိုမို စားသောက်ရသည်။ လှုပ်ရှားမှု ပိုမိုများပြား၍ အရွက်တက်နေသော လူငယ်လူရွယ်များမှာ ကလေးလူကြီး များထက် အစားအစာ ပိုမို စားသောက်နိုင်ကြသည်။ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ပူနွေးနေစေရန်လည်း အပူဓါတ်ကို ပေးလေရာ၊ အေးသောတိုင်းပြည်တွင် နေထိုင်သူများသည် အပူဓါတ်ပေးနိုင်သည့် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါသော အစာများနှင့် အဆီများသော အစာများကို များစွာ စားသောက်ပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။
အဆီနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်မှာ အဆီ၏တဝက်ခန့်မျှ လောက်သာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အပူဓါတ် ပေးနိုင်စွမ်းသည်။ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် တစ်ပေါင်လျှင် အပူဓါတ် ကယ်လိုရီ ၁၈၂ဝ ပါရှိ၍ အဆီတစ်ပေါင် လျှင် ကယ်လိုရီ ၄ဝ၈ဝ မျှအပူဓါတ် ပါရှိသည်။
ကယ်လိုရီ (အပူဧကမူ)ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပူနွေး စေသည့်အပူဓါတ်၏ အတိုင်းအဆဖြစ်သည်။ လူတို့သည် သွားလာနေထိုင် လှုပ်ရှားမှုအတွက် အင်အားလည်း ဖြစ်စေ၍ အပူငွေ့လည်းပေးသည့် ဓါတ်ကို အရွယ်အလိုက် တစ်နေ့လျှင် မည်မျှလိုအပ်သည်ဟု ကယ်လိုရီဖြင့် တိုင်းဆ၍ ပြောဆိုကြရသည်။ ၁၂-၁၃ နှစ်ရွယ် ယောက်ျားကလေး တစ်ယောက် သည် ကယ်လိုရီ ၂၃ဝဝ-၂၇ဝဝ မျှနေ့စဉ် လိုအပ်၍
ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါသော အစားအစာများတွင် အာလူး၊ ပေါင်မုန့်၊ ပြောင်းဖူး၊ ဆန်၊ သကြား၊ ငှက်ပျောသီး၊ လိမ်မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆီးသီး၊ မုန်လာဥဝါ၊ ပဲနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျာ ပါဝင်သည်။ အစားအစာများကို ကျွန်ုပ်တို့ စားသောက်လိုက်သောအခါ အစာအိမ်အတွင်းသို့ ရောက်သွားလျှင် အစာကြေ ချက်ခြင်းဖြင့် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် စသည့်ဓါတ်များ ဖြစ်လာစေသည်။ ထိုသို့ ဓါတ်များ ဖြစ်လာ သောအခါ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပွား အားရှိလာရန် ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။ ဖေါ်ပြခဲ့သော အစားအစာများထဲတွင် သကြားသည် ကြွက်သားများ သန်စွမ်းရေးအတွက် အထူးအားပေးသည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/293108" မှ ရယူရန်